एउटा व्यक्तिको सम्पत्ती १२ डलरबाट सुरु भएर २७ विलियन डलर ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कर्पोरेट > एउटा व्यक्तिको सम्पत्ती १२ डलरबाट सुरु भएर २७ विलियन डलर !
ज्याक माको जन्म सन् १९६४ को अक्टोबर १५ मा भएको थियो । दक्षिणपूर्वीय चीनमा रहेको हाङजोउ भन्ने ठाउँम उनी जन्मिएका थिए । उनका एक दाजु र बहिनी थिए । त्यतिबेला चीन कम्युनिष्ट चाइनाको रुपमा एक्लिएको राज्य थियो । ज्याक माको परिवारसँग आफ्ना लागि खर्च गर्नका लागि केही पैसा पनि थिएन ।
स्कुल पढ्दा उनी आफ्ना अन्य समकक्षीहरुसँग प्रायः लडाइँ गरिरहन्थे । उनको रुचिको विषय भनेको फट्यांग्रा संकलन गर्नु र तिनीहरुलाई एक आपसमा लडाउनु थियो । उनी त्यसमा त्यति धेरै मख्ख हुन्थे कि उनलाई फट्यांग्राको आवाजबाटै त्यसको प्रजाती थाहा हुन्थ्यो ।
सन् १९७२ मा जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले हाङजोउको भ्रमण गरे । तब ज्याक माको जन्मथलो पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास हुन थाल्यो । त्यतिबेला उनी बिहानै उठ्थे र शहरको होटलको अगाडि गएर उभिन्थे । त्यहाँ आउने पर्यटकलाई शहर घुमाइदिने र त्यसवापत अंग्रेजी सिक्न पाइने उनको लोभ थियो । त्यतिबेला उनले साथी बनाएको एउटा पर्यटकले नै उनको नाम ज्याक राखिदिएका थिए ।
उनीसँग प्रशस्त पैसा थिएन, न त कुनै ठूलो व्यक्तिसँग सम्बन्ध नै थियो । त्यसैले अगाडि बढ्नका लागि शिक्षा अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा ज्याक मालाई थाहा थिए । त्यसैले उनले स्कुले शिक्षा सकेपछि कलेज भर्ना हुने विचार गरे । तर प्रवेश परीक्षामा उनी दुई पटक फेल भए र पनि उनले हिम्मत हारेनन् । तेस्रो प्रयासमा उनले नाम निकाले र उनले अध्ययन गर्न थाले । सन् १९८८ मा उनले कलेजको अध्ययन सकाए र धेरैभन्दा धेरै जागिरमा आवेदन दिए ।
त्यतिबेलाको दिन उनका लागि निकै कष्टकर थियो । उनलाई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्थानीय एक विश्वविद्यालयमा पढाउन थाले । त्यतिबेला उनको मासिक तलब मात्र १२ डलर थियो ।
ज्याक मालाई कम्युटर र कोडिङका बारेमा केही थाहा थिएन । उनले आफ्नो पहिलो अमेरिकी भ्रमणका बारेमा सन् १९९५ मा मात्र कम्युटर÷इमेल चलाउने अवसर पाएका थिए । ज्याकले त्यतिबेला अनलाईनमा वियर सर्च गरे र उनले त्यहाँ प्रकाशित नतिजामा कुनै पनि चीनियाँ वियर देखेनन् । यसपछि उनले चीनकै लागि एक इन्टरनेट कम्पनी खोल्ने विचार गरे ।
तर उनलाई सफलता सजिलै हात परेन । उनको दुईवटा प्रयास व्यर्थ भयो । त्यसको चारवर्षपछि उनले आफ्नो कोठामा १७ जना साथीहरु जम्मा गरे र उनीहरुलाई आफ्नो लागि लगानी गर्न प्रेरित गरे । त्यसपछि उनले अनलाईन व्यापारिक संजाल ‘अलिबाबा’ खोल्ने निर्णय गरे । यो साइटले निर्यातकर्ताहरुलाई आफ्नो सामान पोष्ट गर्ने ठाउँ दिन्थ्यो जुन ग्राहकहरुले सजिलै किन्न सक्थे ।
छिटै नै, यसको सेवाले संसारका भरका धेरै मानिसहरुलाई आकर्षित ग¥यो । त्यसपछि ठूला ठूला कम्पनीहरुले पनि अलिबाबा प्रति चासो देखाएर यसमाथि लगानी गर्न थाले । सन् २००५ मा याहुले अलिबाबामाथि १ बिलियन डलरको लगानी ग¥यो र यसको ४० प्रतिशत स्टेक लियो ।
सन् २०१३ मा ज्याक माले सिइओ पद छाड्दै व्यवस्थापक अध्यक्षको रुपमा बस्न चाहे । त्यो वर्षकै सेप्टेम्बर १९ मा अलिबाबा पब्लिक कम्पनीका रुपमा अगाडि आयो ।
ज्याक माले सधैं भन्ने गरेका छन् कि, ‘आज हामीले जे पाएका छौं, त्यो पैसा होइन । हामीले पाएको भनेको मानिसहरुको विश्वास हो ।’
फोब्र्सको सूचिमा चीनकै सर्वाधिक दोस्रो धनीमा आउने ज्याक मासँग अहिले २७ विलियन डलर सम्पत्ति रहेकोछ । सन् २०१५ मा उनी सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्वमा २२औं नम्बरमा परेका थिए । उनी सन् २०१६ कै लिष्टमा टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा सर्वाधिक धनीमा ८औं नम्बरमा पर्छन् ।
उनका अनुसार उनी जीवनमा सात पटक नराम्रोसँग फेल भएका छन्, तर पनि उनले हिम्मत हारेनन् । पहिलो पटक उनले स्कुले जीवनमा असफल भएका थिए । उनी स्कुलको परीक्षामा पटक पटक फेल भएका थिए तर पनि उनले आप्mनो अध्ययनलाई बिट मारेनन् ।
त्यस्तै, उनले कलेजको प्रवेश परीक्षामा १२० अंकमा मात्र १ अंक ल्याएका थिए । उनी त्यसमा दुई पटक फेल भएका थिए । तर पनि उनले हिम्मत हारेनन् ।
उनी हार्वर विश्वविद्यालयमा पढ्न चाहन्थे । यसका लागि उनले त्यहाँ आवेदन दिए । त्यहाँ उनी १० पटक रिजेक्ट भएका थिए ।
उनलाई जीवनमा ३० वटा जागिरबाट अस्वीकार गरिएको थियो । ३० वटा जागिर लगातार नपाउँदा पनि उनले हिम्मत हारेनन् ।
केएफसीले एउटा अन्तरवार्ता लिएको थियो । त्यसमा २४ जनाले भाग लिएका थिए । यस्तोमा ज्याक मा मात्र एक व्यक्ति थिए जसलाई केएफसीले लिन अस्वीकार गरेको थियो । उनको हाइट र लुकलाई लिएर केएफसीले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
काम गर्दै जाँदा असफलता पनि मिल्छ, सोचे जस्तो हुँदैन । त्यस्तै सिलिकन भ्याली भन्ने कम्पनीलाई उनले अलिबाबामाथि इन्भेष्ट गर्न मनाउन सकेनन् । उनी यसलाई आफ्नो ठूलो गल्ती भन्छन् । धन्न त्यतिबेला अलिबाबा टाट पल्टिनबाट जोगिएको थियो ।
आफ्नो अलिबाबा ग्रुपका १८ जनालाई उनले महत्व दिएनन् । किनकी उनी नयाँ पार्टनर÷राम्रो मान्छे आओस् र अलिबाबालाई राम्रोसँग चलाओस् भन्थे । तर यसले झन् उनलाई धन्नै धन्नै टाट पल्टाएको थियो ।
यी सबै घटना उपघटनालाई उनले आफ्नो जीवनको असफलतासँग जोडेका छन् । यति हुँदा हुँदै र यही कुराबाट पाठ सिक्दै आज उनले अलिबाबालाई संसारमै प्रसिद्ध बनाएका छन् भने आफूलाई चीनकै दोस्रो धनी व्यक्तित्वको रुपमा खडा गरेका छन् ।
एजेन्सीको सहयोगमा, ७ मंसिर २०७३, ८।३०
२०७३ मंशिर ७ गते ०८:१८ मा प्रकाशित
अफ्रो–एसियाली संगठनमा नयाँ नेतृत्व
पाँचथरका तीन किसानले पाए राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार !
सभापति देउवबाबाट कांग्रेस चल्न नसक्ने भन्दै रामचन्द्र पौडेल आक्रोसित !
माधुरी दिक्षितको विवाह काण्ड भाईरल !
जोरपाटीमा सानिमा बैंकको थप नयाँ शाखा
﻿ अमेरिकामा रजनीकान्तको क्रेज, २ घण्टामै सबै टिकट बिक्री !
बैंक अध्यक्षहरु अनुकूल ऐन बनाउँदै